ne admin pane 20-08-08
Zvinotarisirwa kuti ushandise zvakachengeteka Chenjerera kuchengetedzwa paunenge uchishandisa aminoguanidine hydrochloride, nekuti ikemikari ine chepfu. Kana paine dambudziko rekuchengetedza, rinogona kutambura kurasikirwa kukuru. Izvi zvinotevera zvinodiwa kuti ushandise zvakachengeteka. ...
Makemikari zvivakwa uye kushandiswa kwep-hydroxybenzaldehyde
Makemikari zvivakwa zve p-hydroxybenzaldehyde P-hydroxybenzaldehyde yakashandiswa zvinobudirira mukurapa, zvipodaidzo, chikafu nemimwe minda, uye nzvimbo yaro yekushandisa ichiri kuwedzera. Kana iwe uchida kupa yakazara kutamba kune kwayo kuita ...
Aminoguanidine bicarbonate ikemikari ine chepfu, saka ine zvido zvekuchengetedza. Izvo zvinodikanwa kuzvichengeta kuti uve nechokwadi chekuchengetedzeka kwezvigadzirwa nevashandi. Heano mamwe matanho ekuchengetedza aunofanira kugona. 1 ...